Kabtan Ku Xigeenka Liverpool Ee James Milner Oo Ka Hadlay Qaab Ciyaareedka Kooxdiisa Iyo Sida Ay Ciyaartoydu Booska Ugu Tartamayaan – idalenews.com
Kabtan ku xigeenka Liverpool ee James Milner ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka fiican ee ay kooxdiisu ku jirto iyo tayada ciyaartoyda kooxdiisa, wuxuuna sheegay in ciyaartoyda uu culays ku saaran yahay sidii ay u sii joogtayn lahaayeen qaab ciyaareedkooda fiican haddii kale in maaliyadu ay ku wareegi doonto ciyaartoy kale.
Milner ayaa sheegay in ay jiraan ciyaartoy tayoleh oo kaydka kooxdiisa u fadhiya, kuwo da’yar ah oo albaabka u garaacaya in Klopp uu fursad siiyo iyo waliba xidigo kooxda dhaawac kaga maqan. James Milner oo qaab ciyaareed layaableh ku soo badhigay booska difaaca bidix ayaa sheegay in ciyaartoygii qaab ciyaareed fiican samayn waayaa uu ciyaartoy kale booskiisa u lumin doono.
Alberto Moreno ayaa kaydka Liverpool ku caajisay kadib markii uu sameeyay qaladaad xun, wuxuuna Klopp go’aan ku gaadhay in xidiga garabka ama khadka dhexe ka soo ciyaari jiray waqtiga dheer ee Milner uu booska difaaca bidix ku buuxiyo wuxuuna ilaa hadda soo badhigay qaab ciyaareed uu Klopp u guuxay.
Milner oo laba gool ka dhaliyay kulankii Hull City ee Anfield ayaa yidhi: ” Hoos u fiiri liiska kooxda iyo tayada aan la rumaysan karin, waxaad arki kartaa ciyaartoyda kaydka iyo wiilasha dhaawacan. Qaar ka mid ah ayaan kooxda ku jirin iyo ciyaartoyda da’yarta ah ee kooxda soo garaacaya oo tayadan leh, waa wax farxad leh”.
Intaa kadib James Milner ayaa ka hadlay in ciyaartoyga bandhig fiican samayn waayaa in uu booskiisa waayi doono wuxuuna yidhi:“Waxaad ogtahay in haddii aad bandhig fiican samayn waydo maaliyada lagaa qaadi doono oo cid kale ay fursada heli doonto isla markaana waxaanad ogayn muddada ay qaadan doonto waqtiga ay maaliyadaa dib u heli doonto”.
Milner ayaa hadalkiisa sii raaciyay: ” Waxaad u baahan tahay tartankaas loogu jiro boosaska si aad isku riixdaan, waxaan ku rajo waynahay in aanu sii wadan doono in aanu koox ahaan horumar u samayno”.
Kadib Barbarihii Las Palmas, Real Madrid Oo Maanta Dib U Bilaabatay Tababarka Ay Ugu Diyaar Garoobayso Kulanka Champions Leaque-ga Ee Borussia Dortmund
Kooxaha Borussia Dortmund Iyo Sporting Lisbon Oo Ku Maadsaday Labadii Barbaro Ee Ay…